Interview – Page 8 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
देशमा नयाँ संविधान घोषणा गरिएपनि त्यसले उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगका जनतामा खासै उत्साह सञ्चार गर्न सकिरहेको छैन । देशमा यतिबेला संविधान पूर्ण रुपमा स्विकार गरेका, आंशिक स्विकार गरेका र पूर्ण रुपमा अस्विकार गरेका शक्तिहरु क्रियाशील छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माण गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो झनै जटिल हुनु स्वभाविकै हो । देश अहिले […]
‘थारुहरु नेपाली शासकको लागि प्रिय छैनन् तर नेपालप्रति थारुहरुको अगाध माया छ’
क्रान्तिकारी माओवादी, तथा अध्यक्ष थारु मुक्ति आन्दोलनको वर्तमान स्थितिबारे संक्षिप्तमा बताइदिनुस् न । –नेपालको तराई र भित्री मधेशको भूभागमा बसोबास गर्ने सोझो जातिको पहिचान बोकेका थारुहरु नेपालको कूल जनसंख्याको ६.६ प्रतिशतको संख्यामा रहेका छन् । जातीय जनसंख्याका हिसाबले चौथो ठूलो जातीय समुदाय हो यो । थारु समुदायले खासगरी राणा शासनकालदेखि राज्यबाट चरम उत्पीडन, विभेद र […]
‘हाम्रो संघर्षको जित भएको छ’
दाहाल सरकार त क्रान्तिकारी माओवादीमाथि पूरै दमनमा उत्रियो नि ! के त्यही एक हजारको स्वेच्छिक आर्थिक अभियान मात्रै यसको कारण के हो त ? –नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एकातिर साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरुको वर्चस्व बढ्दै गएको कुरा सबैमा सर्वविदितै छ । त्यसैको परिणामस्वरुप कहिले वली सरकार, कहिले दाहालको सरकार बन्ने क्रम जारी छ । दाहाल सरकारको […]
उत्पीडित मधेसी सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन् : कृष्णदेव सिंह
१.मिथिला राज्यमा क्रान्तिकारी माओवादीको सांगठानिक तथा राजनीतिक उपस्थिति कस्तो रहेको छ ? बताइदिनुस् न । सापेक्षिक हिसाबले मिथिला राज्यमा क्रान्तिकारी माओवादीको सांगठानिक र राजनीतिक अवस्था राम्रो छ । सबभन्दा राम्रो सिराहा, त्यसपछि महोत्तरी, धनुषा, सर्लाहीमा छ । तुलनात्मक रुपमा अलि कमजोर सप्तरीमा छ । सरकारी अफिसहरुमा केही कार्यक्रम हुँदा प्रायः सबैमा हामी उपस्थित हुन्छौं र […]
हामीले साँच्चै नचाहेर नालीमा मुख नगाडेका हौं भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नेछौं
–पार्टीबाट बादल गुटसँगै क्रान्तिकारी युवा लिगको नेतृत्व पनि पार्टी र क्रान्तिबाट पलायन भएपछि आफ्नो संयोजकत्वमा बनेको क्रान्तिकारी युवा लिगको दोस्रो राष्ट्रिय भेला भव्य रुपमा सम्पन्न गराउदै युवाहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो । कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । एउटा सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको थियो, “पार्टी र वर्गभन्दा कोही माथि हुँदैन” । पार्टी, क्रान्ति र […]
Posted in: InterviewLeaveacomment
चुनौतीहरुलाई क्रान्तिमा बदल्ने आँट र साहस गर्नैपर्दछ
माओवादी आन्दोलन निकै कमजोर बनेको यो अवस्थामा संगठन बनाउन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ? –क्रान्तिका नायक भन्नेहरु नै क्रान्तिका खलनायकमा बदलिएपछि प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेको क्रान्तिले सेटब्याक खान पुग्यो । यसले आम जनतामा मात्र होइन, क्रान्तिकारी नेता र कार्यकर्तामा समेत निराशा पैदा गरायो । परिणामतः विचार उत्कृष्ट हुँदा हुँदै पनि संगठन निर्माणको कार्य साँच्चै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण […]
क्रान्तिविना जनताको मुक्ति सम्भव छैन
नेपाल यतिबेला क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । क्रान्ति यतिबेला पछि परेर प्रतिक्रान्तिले मुन्टो उठाउने ठाउँमात्रै पाएको छैन, क्रान्तिकारीलाई समाप्त पार्नका लागि ठूलै कसरत पनि भइरहेकै छ । तर, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको यो समयमा पनि क्रान्तिकारीहरु आफ्नो लक्ष्य प्राप्तीका लागि संघर्षको मैदानमा जुटि नै रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र […]
पहिचान सुनिश्चित नगर्ने पुनःसंचना र संघीयताको काम छैन
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेको छ ? यतिवेला राष्ट्रिय स्वाधीनता अत्यन्त कमजोर बनेको छ । जनताको जनजीवन अझ कष्टकर र जर्जर बन्दै गएको छ । महंगीले आकास छोएको छ । आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको र सामाजिक असुरक्षा बढ्दो छ । भ्रष्टचार, कालाबजारी र तस्करी मौलाउँदो छ । नेपालमै रोजगारीको अभावमा […]
राजनैतिक नेतृत्वको गद्दारीप्रति जनता आक्रोशित छन्
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) अवधको पछिल्लो स्थितिबारे बताइदिनुस् न । अवधमा भरखरै मध्यपश्चिम राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय समितिले लिएका नीतिहरु तथा कार्यक्रमलाई एक रुपतासाथ कार्यान्वयन गर्न र कार्यकर्ताको नेतृत्वसँग साक्षात्कार गर्ने प्रश्नमा यो प्रशिक्षण एकदमै फलदायी बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादीले सिर्जना गरेका भ्रमलाई चिर्न र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि […]
‘क्रान्तिकारी माओवादी’ नै नेपालको एक मात्र क्रान्तिकारी पार्टी हो
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नेवाः राज्यभित्र पछिल्लो पार्टी विभाजनपछिको स्थितिबारे बताइदिनुस् न । –नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गदर्शनका आधारमा खडा भएको नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्यमा पुग्ने दृढ अठोटका साथ अगाडि बढेको सर्वहारावर्गको एक मात्र क्रान्तिकारी पार्टी हो । यसकारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वर्गदुश्मन तथा माक्र्सवादको खोल ओढेर सर्वहारावर्गलाई ठग्दै आएका सबै खाले […]